Akụkọ - Coca-Cola na-anọchi iko ndị a gbanwere, Unilever na-eme ka plastik megharịrị
Ahịa ahịa ụwa dịka Pepsi, Coca-Cola, na Unilever emeela nkwa nkwanye ugwu na-enweghị atụ. Ka anyị lee anya, gịnị bụ mmepe nkwakọ ngwaahịa na-adịbeghị anya nke ụdị ndị a?
Pepsi-Cola Europe: Dochie karama rọba emegharịrị na 2022
Pepsi-Cola Europe, nke na-emepụta Pepsi-Cola MAX, 7Up Free, Tropicana na ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ, kwupụtara n'oge na-adịbeghị anya na ọ ga-eji ngwugwu plastik nke 100% dochie ngwaahịa ya niile na njedebe nke 2022.
Pepsi-Cola Europe ga-eji ngwaahịa 100% recycled plastic mechie ngwaahịa ya niile na njedebe nke 2022.
Nke a na-emeghachi omume na ntinye aka nke ụlọ ọrụ na akụ na ụba okirikiri plastik, na Pepsi Cola kwere nkwa iji belata 40% carbon footprint.
Tupu nke a, Pepsi-Cola gbanwere ihe ọ smoụ smoụ mmanya na-atọ ụtọ na Tropicana Lean na 100 ihe mkpuchi plastic.
Pepsi-Cola Europe dekwara ozi a na-edegharịgharị na karama ahụ, na-echetara ndị na-eri ihe ka ha gbanye karama plastik mgbe ha jisịrị ha. N'otu oge ahụ, a na-ekwupụtakwa ozi ọha na eze na ngwungwu site na ọwa mgbasa ozi dịka TV na mmemme.
Coca-Cola Australia: Belata ojiji nke plastik ọhụrụ dị 40,000
Australianlọ ọrụ Australian Coca-Cola kwupụtara na site na njedebe nke 2021, ọ ga-ebelata iji 40,000 tọn nke plastic na-amaghị nwoke (ma e jiri ya tụnyere 2017). A ga-enweta ihe mgbaru ọsọ a site na dochie iko mmanya ya na friji ya na plastik elegharịrị.
Russell Mahoney, Director nke Ọha na Ọha, Nkwukọrịta na Nkwado nke Coca-Cola South Pacific, kwuru n'afọ gara aga na agbanweela ụfọdụ mgbanwe na nkwakọ ngwaahịa Australia, gụnyere dochie karama rọba nwere ikike nke ihe na-erughị lita 1 na karama rọba emegharịrị, na na-ewepu ahịhịa rọba na Agitator.
“Anyị nwere ọrụ iji belata akara ụkwụ gburugburu ebe obibi anyị site na ihe ọhụrụ ma nyere aka dozie nsogbu nke mmetọ mkpofu plastik. Iji iko mmanya na ihe mkpuchi eme ihe bụ atụmatụ ọzọ Coca-Cola chọrọ maka ịbelata mkpofu plastik. ” Mahoney kwuru.
Dabere na ọhụụ "World Waste-Free" nke Coca-Cola, ebumnuche ya zuru ụwa ọnụ bụ imegharị ma jiri karama na kom kom na nkwakọ ngwaahịa a na-ere site na 2030, wee hụ na ngwongwo ya niile agaghị abanye ebe mkpofu ma ọ bụ oke osimiri. Na nke a, karama Coca-Cola Amatil na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịchịkọta atụmatụ nchekwa ihe nkwakọ ngwaahịa (CDS) gafee Australia.
Coca-Cola esetịpụkwala ihe mgbaru ọsọ zuru ụwa ọnụ iji jiri ihe dịkarịa ala 50% mee ihe na nkwakọ ngwaahịa site na 2030. Ugbu a, karama plastik Australia emeela ihe mgbaru ọsọ a.
Unilever: Ojiji nke plastik megharịrị ga-okpukpu abụọ n'afọ ọzọ
Unilever weputara ọhụụ ọhụụ nke nkwakọ ngwaahịa ya. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na ya abawanyela ojiji nke plastik emegharịrị na tọn 75,000, ihe karịrị 10% nke ojiji plastik ya niile. Ebumnuche Unilever bụ iji 2025 mee ihe dịkarịa ala 25%.
N'afọ gara aga, Unilever kwuru na akara a ga-ebelata ihe karịrị 100,000 tọn nke plastic na-amaghị nwoke ma jiri ike na-eji plastik emegharị site na 2025, na-emezu ebumnuche nke ịkwụsị ojiji nke plastic plastic.